Chrysanthemums - mid ka mid ah ubaxa dayrta ugu caansan dunida oo dhan. Bloomkoodu waa mid aad u badan, oo aan caadi ahayn midab leh oo muddo dheer soconaya. Waxaa jira tiro aad u badan oo ah noocyada kala duwan iyo noocyada dhirta. Maqaalkani wuxuu qeexayaa noocyada caanka ah ee Chrysanthemums iyo noocyada ugu habboon beerta. Noocyo aan caan ahayn Chrysanthemum wuxuu leeyahay 160 nooc iyo in ka badan 1000 nooc.